Shiinaha Custom Small MOQ Plain Hadiyad xumbo mesh Trucker Hat Cap warshad iyo saarayaasha | Harqaanle
5-Koofiyad Koofiyad ah
Caadi ama cad
Badhanka toddobada indhood ee caaga ah, ama sida aad u baahan tahay
L / C, T / T, Ururka Cimilada
Tianjin, ama sida aad u baahan tahay
Xirxirida: 50pcs hal polybag, ka dibna 4 polybags kartoonka. Cabbirka kartoonka: 68 * 45 * 38cm ama sida aad ubaahantahay.Ali Express sax maahan, fadlan nala soo xiriir si aan u xaqiijino khidmada lasaaray.
Tirada (Cadad) 1 - 1000 1001 - 10000 10000
Est. Waqti (maalmo) 10 14 In lagu gorgortamo
Daboolkaani dukaankeennu wuxuu bixin karaa koofiyadaha xamuulka xumbada bannaan,
sidoo kale waxaan ku siin karnaa koofiyadaha mesh daabacaadda daabacaadda caadooyinkaaga iyo naqshadahaaga.
Koofiyadda gawaadhida saafiga ahi waxay geyn kartaa 3 maalmood gudahood.
Daabacaadda koofiyadda xamuulka qaada xamuulka ayaa yarayn kara 5-7days haddii amarkaagu ka yar yahay 5000pcs.
Moq ee koofiyadaha kaydka waa 1 pc,
loogu talagalay daabacaadda daabacaadda daabacaadda astaanta caagga ah waa 20pcs midabkiiba / naqshad ahaan.
Daabacaaddu waxay noqon kartaa kala iibsiga kuleylka, sublimation, daabacaadda shaashadda, daabacaadda UV iyo daabacaad buuxda.
Waxaan leenahay koofiyado badan oo koofiyado xamuul ah si aan ula kulano shuruudaha macaamiisha.
Haddii aad u baahan tahay midab cusub oo gaar ah, annaguna waannu kuu warsan karnaa.
1.Fabric 100% caag (xumbo & mesh)
2.Color casaan, oranjo, cagaaran nal, buluug cirka,…
3.Qiyaas 58cm, cabir kasta oo aan caado ka dhigan karno
4.Logo Jadwalka ama daabacaadda (wareejinta kuleylka, sublimation, shaashadda, daabacaadda UV)
5.Warbaash / dahaadh polyester, sidoo kale waxaan sameyn karnaa cudbi, dhar caafimaad qaba
6.Xiritaanka Xiritaanka xargaha balastiga ah, sidoo kale waxaan sameyn karnaa bir, cajalad sixir ah… xiritaanka
7. Waqtiga hore muunad: 3 maalmood oo shaqo, Soosaarid jumlo: 21 maalmood ka dib soosaarka horay loo xaqiijiyay
8.Xirxirida 50 kumbiyuutarro / poly / polybag, 200 kumbiyuutarro / kartoon 68 * 48 * 45cm
9.Delivery way Hawada, badda ama express, sida Fedex, DHL, UPS ama TNT
10.Port Tianjin, Shanghai, ama dekado kale
11. shuruudaha bixinta L / C, T / T, midowga reer galbeedka, gram Money, Wareejinta Bangiga
1.Waxyaabaha waa kala duwan yihiin, waxaan leenahay suuf, akrilik, shiraac, corduroy, dhogor, Nylon, maqaar, poly-cudbi, dhogor isku dhafan iyo wixii la mid ah xulashadaada.
Calaamadda 2.For, waxaan leenahay daabac, daabacan, balastar maqaar ah, astaan ​​biraha ah, mid fudud, waxaan u waadi karnaa sida codsigaaga.
Waxaan bixinaa adeegga OEM iyo ODM, soo dhaweyn u imow caadada.
Noocyada calaamadaha loogu talagalay koofiyadda xamuulka qaada xumbada
kuleylka daabacaadda daabacaadda daabacaadda daabacaadda daabacaadda UV
Habka wax soo saarka ee koofiyadda xamuulka qaada xumbada
Fadlan hal baaritaan noo soo dir halkan.
Su'aasha 1aad: Waa maxay amarkaaga ugu yar?
Jawaab: Nidaamkeena koofiyadda xamuulka xumbada min min waa 1 kumbiyuutar midkiiba halkii naqshadba
Su'aasha 2aad: Ma yeelan karnaa naqshadeena / sumadeena / astaanta wax soo saarka?
Jawaab: Sure.OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa.
Waxaan ku dhejin karnaa astaantaada iyo sumaddaada calaamadeena koofiyadeena / koofiyadeena, waxaan sidoo kale ku kaftami doonnaa xaqiijintaada ka hor intaadan dalban.
Su’aasha 3-aad: Waa maxay waqtiga hogaaminta muunad iyo wax soo saar? Waa imisa qiimaha saamiga?
Jawaab: Waxay qaadan doontaa qiyaastii 5 maalmood oo muunad ah iyo 14 maalmood oo wax soosaar ballaaran ah. Waqtiga saxda ah wuxuu kuxiranyahay naqshadeyntaada iyo dalbashada qty. Waxaan kuu soo diri karnaa shaybaarka laakiin tijaabada ayaa lagaa qaadayaa. Kadib amarka la xaqiijiyo, waxaan dib u bixin doonnaa khidmadda muunadda.
Su'aasha 4aad: Waa sidee nidaamka amarku?
Jawaab: Xaqiiji qeexitaanka koofiyadaha -> xaqiiji qiimaha -> caddeyn -> xaqiiji muunad -> saxiix heshiis, lacag dhigaal dhig iyo diyaarso wax soo saar badan -> dhammeystirka wax soo saarka -> kormeerka (sawir ama alaab dhab ah) -> bixinta dheelitirka -> gaarsiinta -> adeegga iibka kadib.
Su'aasha 5aad: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ee la aqbalo?
Jawaab: Waxaan aqbalnaa lacag bixinta aaminka ah ee alibaba.paypal, midowga reer galbeedka, T / T ama L / C marka la arko, waxaad kaliya bixinaysaa 50% dhigaal ah si aad u bilawdo wax soosaarka iyo dheelitirka waa in la bixiyaa ka hor inta aan la soo dirin. Waxaan sidoo kale taageernaa Hubinta Ganacsiga, kaas oo kuu xaqiijinaya lacag bixintaada oo ah mid badbaado leh oo maraakiibta lagu soo raro.
Su’aasha 6aad: Sideed u dammaanad qaadi kartaa tayada?
Jawaab: Waxaan leenahay shaqaale si fiican u tababaran oo xirfadlayaal ah iyo nidaam adag oo QC ah oo isku xira wax soo saar kasta. Iyo in badeecad kasta la hubiyo 100% kahor rarka.